August 2017 - Vernac News
August 29, 2017 April 27, 2020 Vernac News
Staff Writer Ekapa- Iqela lamanina angamatshintliziyo ebebambe uqhankqalazo lwenzolo oluchasene nomkhwa wodlwengulo kwiDyunivesithi yaseKapa ngoLwesibini. Oluqhankalazo beluququzelelwe yi AIDS Healthcare Foundation (AHF) ibambisene namaqela amatshantlaziyo afana ne UCT Survivors kunye ne UCT Sexual Assault Response Team. Abaqhankqalazi bebebambe inzolo, besenza umngcelele osuka kwikhampasi enkulu ukuya eBremner. Imilomo ibivalwe ngeteyiphu emnyama. Izalathi zoqhankqalazo bezinamagama wabaswelekayo ngenxa […]
Tagged AIDS HealthCare Foundation, UCT Survivors	Read More
Sakhikhaya Dlala & Simbarashe Nyatsanzi Ekapa – Zinqunyanyisiwe izifundo namhlanje e-CPUT, kwikhampasi yaseKapa kulandela uqhankqalazo lwabafundi abakhalazela ukunqongophala kwamagumbi okulala. Abaphathi baledyunivesithi bagqibe ngelokuzivala iiklasi namhlanje emva koluqhankqalazo. Kwiinkcazelo ekhutshwe namhlanje, abaphathi batyhola abafundi ngokukhupha abasebenzi nabafundi kumagumbi okuphangela nokufunda kwanokutshiswa kwe-ofisi ekwiholo likawonke-wonke. “Kunqongophele amagumbi wokulala apha kule dyunivesithi, yiyo lento sizibandakanya koluqhankqalazo”, uphawule […]
Tagged CPUT shutdown	Read More
Sakhikhaya Dlala Cape Town- UNkosinathi ‘Smallz’ Dlamini ubhengezwe njengophume phambili kukhuphiswano obeluququzelelwe ngabakwa Old Mutual phantsi hashtag #OMGWAP17. I -#OMGWAP17 Ibilukhuphiswano lakwa Old Mutual obelujolise ekufundiseni ngokonga nangokulawula ukusetyenziswa kwemali. Ababethabatha inxaxheba kolukhuphiswano bekumele bashicilele ividiyo besenza umculo we-rap okanye umbongo. Umlenze wokugqibela wolukhuphiswano ububanjelwe e-UCT kuLwesine weveki edlulileyo nalapho abo bebethabatha inxaxheba babonakalise khona […]
Tagged Nkosinathi 'Smallz' Dlamini, Old Mutual	Read More